Amazon Cyber ​​Monday na -emekọ 2019: Ngwaahịa 13 na -eme onyinye zuru oke - Ụdị
Mmemme Amazon Cyber ​​Mọnde iri na atọ a bụ nnukwu onyinye 2019
TBH, anyị ga -azụta ha ọbụlagodi na ha anaghị ere ya.
Alicia Silverstone/Nchịkọta Paramount/Everett
Ọ bụ Mọnde mbụ nke Disemba, nke pụtara na ezumike dị ebe a - yanakwa azụmahịa ndị Cyber ​​Monday nke Amazon. Ọ bụ ụbọchị zuru oke iji gbasaa n'ihe ndị ị na-achọkarị, yana oge kacha mma iji tụọ tiketi ndị ahụ ị na-ekwesịghị inwe.
Mana ọ bụrụ na ịfuru ya - n'agbanyeghị na anyị enweghị ike iche na ị mere - ihe niile dị na ịntanetị na -erere Cyber ​​Mọnde. Anyị maara na nhọrọ niile a nwere ike ịkarị oke - ọkachasị ma ọ bụrụ na ị na -achọ tinye onyinye ole na ole n'ime ngwakọta - yabụ anyị gara n'ihu mechiere gị ubi ahụ. (Dịkarịa ala na Amazon.)
Yabụ ọ bụrụ na ụgbọ ala gị na -ejupụta na akpụkpọ ụkwụ dị ọnụ ala, akpa onye mmebe , na ọmarịcha mma zụrụ maka onwe gi , ọ bụ oge ijikwa ọnọdụ onyinye gị na azụmahịa Cyber ​​Monday nke Amazon. Ma ị nwere mmasị ịnye ngwaahịa Apple ọhụrụ (dị ka MacBook Air maka $ 300 gbanyụọ - ee, n'ezie), ihe njikwa egwuregwu ọhụrụ maka nwa nwanne gị ma ọ bụ nwa nwanne gị (anyị na -akwado Nintendo Switch ihe ọchị na -atọ ọchị), ma ọ bụ setịpụrụ mma ama ama, chọta onyinye 13 kachasị mma na -ere na Amazon ebe a.
Apple MacBook Air (13-anụ ọhịa)
Laptọọpụ na -adaba n'ụdị teknụzụ ahụ ịchọrọ mana ọ bụghị mgbe niile choro ịzụta, na -eme ka ha bụrụ ezigbo onyinye -ọkachasị mgbe a na -ere ya. Nke a 13-inch MacBook Air na-abịa na ebe nchekwa 8GB, nchekwa 128GB SSD, yana ọmarịcha $ 300 na-efu mkpado ọnụahịa.
$ 999 Amazon Zụta ugbu a
Kindle na-arụnyere n'ihu ọkụ
Ọ dịghị ihe na -aka akara akara ibe kachasị amasị gị na akwụkwọ akụkọ, mana mgbe ị na -eme njem ma ọ bụ na -aga ọrụ, iburu ọtụtụ akwụkwọ n'otu oge nwere ike iwe gị (ma dịkwa arọ). Maka ndị na -agụ akwụkwọ nwere oke mmụọ, Kindle na -edozi ihe a niile - ịghara ịkọwa, Amazon nwere nnukwu onyinye na e-akwụkwọ ya . Na ụdị ọhụrụ ahụ nwere ọkụ n'ihu wuru ka ha nwee ike na-agụ ya ọbụlagodi mgbe agbanyụrụ ọkụ ụlọ elu ụgbọ elu ahụ.
$ 90 Amazon Zụta ugbu a
Apple AirPods nwere okwu chaja
Anyị enwetala onyinye a na ọnụahịa zuru oke (ikekwe ọbụlagodi ugboro abụọ).
$ 159 Amazon Zụta ugbu a
Nintendo Gbanwee na Mario Kart 8 Deluxe
Ọ bụrụ na ọ dị mma maka Chrissy Teigen, ọ dị mma maka ụmụaka. Site na ngwugwu a, ị nwere ike nye Nintendo Switch yana Mario Kart 8 Deluxe na -eri ahụ nke ukwuu. Ohere inweta bụ, gị na gị ga na -egwu egwu.
kedu ihe agwọ nọchiri anya ya na nrọ
$ 370 Amazon Zụta ugbu a
Amazon Echo Dot (ọgbọ nke atọ)
Ngwa ụlọ a mara mma nke na -ere ahịa ugbu a karịrị ọkara. Ọ dị kọmpat na aghụghọ, nke pụtara na ọ ga -ejikọ ọnụ na ihe ndozi ha ngwa ngwa, kama ịrapara dị ka teknụzụ ọgbara ọhụrụ.
$ 50 Amazon Zụta ugbu a
faịlụ a bụ oke ibu a ga-emeghe site notepad ++
Ihe ọzọ kacha mma ị ga-ekiri na-ekiri ihe nkiri kachasị amasị mmadụ ma gosi ogologo oge oyi niile? Enweghị mkpa iji nkeji iri na-achọ ha. Dị ka Apple TV (naanị na obere ọnụahịa) Roku na -achịkọta ọdịnaya niile kachasị amasị ha site na ngwa na netwọkụ dị iche iche n'otu ebe.
$ 40 Amazon Zụta ugbu a
Otu n'ime ndị na-achọta ngwakọta nke afọ na-achọ n'ikpeazụ n'ahịa (karịa 40% gbanyụọ!). Onye ọ bụla nwetara nke a, ọ ga -eji mmiri dị nro, ofe, na mmiri ara ehi eme ụlọ ka ọ bụrụ ihe ngosi ekele. Ọ dị ka ahia ziri ezi.
$ 550 Amazon Zụta ugbu a
Ngwa ngwa ngwa Smart WiFi 6
Dị ka grail nsọ ngwaahịa mma , ite ngwa ngwa bụ otu n'ime ihe na -esi ike nke kichin nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mmadụ niile na -a byụ iyi. Ugbu a ọ kwụsịrị 40%, ị nwere ike nye ya onye isi nri kacha nso n'ụlọ wee hụ ma ọ dabara na hype.
$ 150 Amazon Zụta ugbu a
Usoro nka nke KitchenAid 5-Qt. Guzosie igwekota na ịwụsa ọta
Kwuo ka iji KitchenAid zụọ ahịa achịcha zụrụ azụ-ugbu a gbadara 35%. Site na ngwakọta ihe ngosi ihe ngosi a, onye isi nri ụlọ ma ọ bụ onye na-eme achịcha na listi gị nwere ike ịmalite imezu nrọ ha na-ewu alaeze Martha Stewart.
$ 430 Amazon Zụta ugbu a
Clarisonic Mia Smart Facial Clean Brush Acne Mgbochi Onyinye Onyinye
Ọ bụrụ na ha chọpụtara nchacha ugboro abụọ na 2019, naanị ihe na -efunahụ usoro ịma mma ha bụ ngwa nhicha ihu mara mma. Ugbu a na 30% gbanyụọ, nke a sitere na Clarisonic na -abịa na nhicha na nchacha ahịhịa ka edobe ha maka ọnwa isii na -esote.
$ 169 Amazon Zụta ugbu a
L'Oréal Paris Voluminous Makeup Lash Paradise Mascara (mkpọ abụọ)
Mgbe anyị tinyere mascara a n'asọmpi ihu na isi megide Too Faced's Better Than Sex, ọ pụtara na ọ dịkwa mma-wee rụọ ọrụ ahụ maka obere $ 13. Jidere ngwugwu abụọ maka ndị hụrụ etemeete n'anya na listi gị (ma ọ bụ onwe gị, anyị agaghị ekpe ikpe).
Ihe ngosi TV sitere na 2000s
$ 20 Amazon Zụta ugbu a
Ịgbasa ihu Mario Badescu na Aloe Herbs na Rosewater
Ihe mkpuchi ihu mmiri nke Mario Badescu bụ ngwaahịa ịchọ mma ma ọ bụrụ na anyị ahụla otu, ma ugbu a maka ọnụ ahịa latte pepemint, igwe ọrụ ebube ndị a na -arụ ọrụ zuru oke.
$ 7 Amazon Zụta ugbu a
Tonymoly a bụ m mpempe akwụkwọ nkpuchi na -agba mmiri nke ukwuu (setịpụrụ 10)
Ihe nkpuchi ihu maka ọnọdụ ọ bụla (hi, mmanya na -acha ọbara ọbara) na nchegbu anụ ahụ. Mana ihe kacha mma gbasara ngwa a bụ na onye ọ bụla na -apụta ihe na -erughị $ 2 otu pop.
nwa agbamakwụkwọ onye ọbịa ejiji
uwe agbamakwụkwọ nkịtị maka oge opupu ihe ubi
kedu agba bụ ntutu Donald trump